Vertical uye yakatwasuka axis mhepo turbine, inoshanda sei? | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Simba remhepo, Renewable simba
Un yakananga mhepo turbine iwe yakatwasuka yakafanana nejenareta yemagetsi inoshanda kushandura iyo kinetic simba remhepo mune yemagetsi simba uye kuburikidza nemhepo turbine mune emagetsi simba.
Kune maviri makuru marudzi e yakamira uye yakatwasuka akabatana mhepo turbine. Avo vane axis yakatwasuka vanomira nekuda kwekusada maitiro ekuchinjisa uye chii chinonzi jenareta yemagetsi inogona kurongwa pasi. Kune rimwe divi, avo vane axis yakatwasuka ndivo vanonyanya kushandiswa uye vanobvumidza kufukidza kwakasiyana siyana kwekusarudzika kwekushandisa kwesimba diki kusvika pakuiswa mumapurazi makuru emhepo.
Tiri kuenda kunzvera mukati meaya makuru maviri, senge ataurwa pamusoro akamira akatwasuka uye akatwasuka mahandara emhepo ekisisi, uye zvavangave mitsva mitsva inoedza kuwana zvakazara mairi kumhepo kuburitsa simba remagetsi. Tiri mumakore mashoma apo tekinoroji inofambira mberi uye tinoona mitsva mitsva nguva dzese dzakadai sedzisina mhepo mhepo turbines yeiyo Vortex chirongwa kana iyo Wind Tree, rudzi rwemuchina muti unogadzira simba chinyararire.
1 Chii chinonzi turbine yemhepo yakamira?
1.1 Savonius mhando
2 Iyo tangi yemhepo inomira yakatwasuka inoshanda sei?
3 Horizontal akabatana mhepo turbines
4 Ndeupi mhando wemhepo turbine inoshanda zvakanyanya?
5 Kushandiswa kwemhepo turbines uye nhoroondo
6 Iyo ramangwana remhepo turbines
6.1 Tekinoroji yemhepo inoyerera turbines
6.2 Vortex Propellerless Mhepo Turbines
6.3 Muti wemhepo
7 Zvikamu zvemhepo turbine
7.3 Mashizha uye rotor
7.4 Iyo gondola
7.7 Kuputsa system
7.8 Kudzora system
Chii chinonzi turbine yemhepo yakamira?
Yakasimudzwa tambo yemhepo turbine ndiyo chaiyo turbine yemhepo umo iyo rotor shaft yakaiswa munzvimbo yakatwasuka uye inogona kuburitsa magetsi zvisinei nekuti inowira kupi mhepo iri kubva. Iko kunakirwa kwerudzi urwu rwehunyambiri hwemhepo turbine ndeyekuti inogona kuburitsa magetsi kunyangwe munzvimbo dzine mhepo shoma nenzvimbo dzemadhorobha uko mirau yekuvaka inowanzo rambidza kuiswa kweturbine yemhepo yakatwasuka.
Sezvambotaurwa, akamira kana akatwasuka axis mhepo turbines hapana kudiwa kwekutungamira mashandiro uye chii chingave jenareta yemagetsi inogona kuwanikwa iri pasi. Yake kugadzirwa kwesimba kwakaderera uye ine zviremara zvidiki senge inoda mota kuti iende.
Pane matatu matatu emhando yemhepo turbines saSavonius, Giromill naDarrrieus.
Izvi zvinozivikanwa nekuve inoumbwa nemasekondi maviri yakasiya misha yakatwasuka pane chinhambwe, kuburikidza nemhepo inofamba, saka inowana simba shoma.
Inotaridzika kuve ne seti yematanho akasungirirwa ine mbariro mbiri pane yakatwasuka axis uye inopa magetsi ekugovera kubva 10 kusvika 20 Kw.
Yakagadzirwa nemaviri kana matatu ebiconvex mashizha akabatanidzwa kune iyo yakamira axis pazasi uye kumusoro, iyo inobvumidza kutora mukana wemhepo mukati mehupamhi bhendi bhendi. Chinokanganisa ndechekuti ivo havashanduke vega uye vanoda iyo Savonius rotor.
Iyo tangi yemhepo inomira yakatwasuka inoshanda sei?
Mumagetsi emhepo akamira, mashizha anotenderera nesimba rinofambisa mhepo. Vertical mhepo turbines, kusiyana neiyo yakatwasuka, anogara achienderana nemhepo. Izvo hazvina basa kuti ndeipi nhungamiro yakafanana nekuti vanogona kushanda kunyangwe kana mhepo ichivhuvhuta yakaderera kumhanya. Kubatsira kweaya akamira mhepo turbines ndeyekuti iwo madiki uye akareruka kupfuura ma turbine ane yakatenderera. Kuva idiki, ivo vanogadzira mashoma simba. Nekudaro, ivo vanokwanisa kupisa imba, kuve nemwenje yese yemukati neyekunze yakavhenekera uye kuchinjazve bhatiri remota yemagetsi.
Horizontal akabatana mhepo turbines
Avo vane axis yakatetepa vari Inonyanya kushandiswa uye ndidzo dzatinogona kuwana mumapurazi makuru emhepo uko rudzi urwu rwemhepo turbine inogona kushandiswa pamusoro pe1 Mw yemagetsi.
Iwo chaiwo muchina wekutenderera mune iyo kufamba kunogadzirwa neinetic simba remhepo kana richiita pane rotor iyo inowanzo kuve nemashizha matatu. Iko kutenderera kufamba kunoitwa kunopfuudzwa uye kuwedzerwa nenzira yekumhanyisa kumhanyisa kune jenareta iro rine basa rekugadzira simba remagetsi.
Zvese izvi zvikamu vanomira pagondola Yakaiswa pamusoro peshongwe yekutsigira. Iwo ndiwo akajairwa ayo anogona kuwanikwa mune mamwe matunhu enyika yedu kudhirowa muganhu wakasiyana nenzvimbo asi achipa yakachena uye yakachipa simba.
Turbine yega yega yemhepo ine microprocessor inoona nezve kudzora uye inogadzirisa kutanga kwayo, kushanda uye kudzima akasiyana. Izvi zvinotora zvese izvi ruzivo uye data kune iyo yekumisikidza inodzora nzvimbo. Imwe yeaya ma turbine emhepo anosanganisira, pazasi peshongwe, kabhineti ine zvese zvemagetsi zvikamu (otomatiki switch, ma transformer, overvoltage vadziviriri, nezvimwewo) izvo zvinofambisa kutakurwa kwesimba remagetsi rakagadzirwa kusvikira kubatana kwe network kana kushandiswa. pfungwa.
Simba rakawanikwa kubva kumhepo turbine zvinoenderana nesimba remhepo iyo inodarika neiyo rotor uye yakanangana zvakananga nehuremu hwemhepo, nzvimbo yakatsvairwa nemashizha ayo uye nekumhanyisa kwemhepo.
Iko kushanda kweturbine yemhepo inozivikanwa nesimba rayo rakakombama izvo zvinoratidzira huwandu hwesimba remhepo kumhanya uko kwaungashandiswe uye simba rinodikanwa kune imwe neimwe kesi.
Ndeupi mhando wemhepo turbine inoshanda zvakanyanya?
Kana zvasvika pakusimba kwesimba, yakatwasuka mhepo turbine inokunda mutambo. Uye ndezvekuti ivo vanokwanisa kusvika kune yakakwira kutenderera kumhanya saka ivo vanoda giya bhokisi ine yakaderera kutenderera kuwanda chiyero. Uye zvakare, nekuti iko kuvakwa kweaya maturbine emhepo anofanirwa kuitwa akakwirira zvakanyanya kuwedzera kwekumhanya kwemhepo kunoshandiswa zvakanyanya. Mumatanho ekumusoro emuchadenga, mhepo inomhanya yakakwira nekuti haina chero mhando yezvipingamupinyi.
Ndezvipi zvakanakira VAWT mhepo turbines?
Izvo zvinokanganisa zvemhando idzi dzemhepo turbine zvinosanganisira zvinotevera:
Mutengo wekutanga wekumisikidza wakanyanya kukwirira.
Kana iwe uchifanira munzvimbo isina mhepo yakawandisa nguva dzose, mikana ndeyekuti kushanda nesimba hakugone kubviswa.
Unogona kuve nematambudziko nevavakidzani nekuda kweruzha.
Turbines inowanzo shanda panzvimbo inokwana makumi matatu muzana.
Kushandiswa kwemhepo turbines uye nhoroondo
Iko kushandiswa kwesimba remagetsi kubva kumhepo kwatove kushandiswa nemhepo rotor mudzimba dziri dzoga dziripo kumaruwa pakati pezana ramakore rechiXNUMX.
Asi iyo yakanyatso bheja iyi tekinoroji muma70s yaive Denmark. Izvi zvakabvumira nyika ino kuti ive mumwe wevanotungamira vagadziri yemhando iyi yemhepo turbine, sezvazviri kuVestas uye Nokia Mhepo Simba.
Nechekare muna 2013, simba remhepo yakaburitsa yakaenzana ne33% yemagetsi ese anoshandiswa, iine 39% mu2014.Zvino chinangwa cheDenmark ndechekusvika 50% na2020 uye na2035 84%.
Shanduko yakaburitswa nenyika ino yaive nekuda kwekukwirisa CO2 emissions kuma 70s apfuura, saka simba rinowedzerwazve rakava sarudzo huru yenyika ino. Izvi zvakakonzera kuderera kwekutsamira kwesimba kune dzimwe nyika uye kudzikisira kwekusvibisa kwepasirese.
Nhoroondo yaive kumisikidzwa muDenmark kweiyo turbine yekutanga mhepo yakasvika 2 Mw. Iyo yekudyara yemagetsi yaive neiyo tubular tower uye matatu mashizha. Yakavakwa nevadzidzisi uye vadzidzi vanobva kuchikoro cheTvind. Uye chinonakidza nyaya iyi ndechekuti avo "vafambi" vakasekwa muzuva ravo pamberi pekugadzwa. Kusvika nanhasi turbine iyi ichiri kushanda uye ine dhizaini yakafanana chaizvo neyazvino mhepo turbines.
Iyo ramangwana remhepo turbines
Kusvika nhasi, hunyanzvi hwetekinoroji huri kuenderera mberi huchiuya kunatsiridza mafomu yemhepo simba. Muna 2015, turbine hombe yakaiswa yaive Vestas V164 yekushandisa padyo nemahombekombe.
Muna 2014, zvinopfuura 240.000 emagetsi emagetsi dzaive dzichishanda munyika, dzichigadzira 4% yemagetsi epasirese. Muna 2014, huwandu hwese hwakapasa 336 Gw neChina, United States, Germany, Spain neItaly sevatungamiriri mumisangano.
Uye haizi nyika idzi chete dziri kuwedzera huwandu hwadzo hwemhepo dzakasimudza kana dzakatwasuka mhepo turbines, asi mamwe akawanda ayo vanotsvaga nzira yekuwedzera kugadzikana Sezvazviri kuitika muFrance neEiffel Tower, iyo yava kugadzira simba rayo nekutenda kumhepo ichangobva kuiswa turbines uye kune ayo mwenje mwenje, solar panels uye yekunaya mvura yekunaya system ichawedzerwa kusimudzira yakachena uye yakachipa simba.
Kana isu hatikwanise kukanganwa nezvekuyedza kutsva muchimiro che 157 mhepo turbine yemapurazi matsva matatu emhepo muSouth Africa izvo zvinouya kubva paruoko rweumwe wevanogadzira hukuru hwerudzi urwu rwehunyanzvi senge Nokia. Vachawedzera pakati pe3 chinzvimbo che140 mW uye zvinotarisirwa kuti zvichaiswa kutanga kwegore ra2016 kuti vape magetsi kuvanhu vepedyo venyika ino yeAfrica.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezvemhepo turbines
Tekinoroji yemhepo inoyerera turbines
Sezvataigona kuona mu nhoroondo yesimba remhepo, simba remhepo yekumahombekombe yakatanga kuwedzera muna 2009 pakagadzikwa turbine yemhepo yeHywind inoyerera muNorway nemutengo unosvika pedyo nemamirioni makumi matanhatu nemaviri emadhora.
Japan, mushure mekuitika kwenyukireya yeFukushima, yave akaronga kuisirwa makumi masere marine mhepo turbines kumahombekombe ari pedyo ne2020.
Vortex Propellerless Mhepo Turbines
Kambani yeSpain inonzi Deutecno ine yakagadzira turbine yemhepo isina inofamba zvikamu iyo yakahwina mubairo wekutanga muboka reMagetsi kuThe South Summit 2014.
Aya asingachinjiki mhepo turbines ari ivo vaizove nebasa rekubvisa iwo mahombekombe makuru emhepo iyo inoshandura yakatarisa kumusoro kwese kwavanoiswa. Mashandiro ayo achave akafanana asi ane akakosha kwazvo mutengo kusevha, kunze kwechikonzero chekuti kuigadzirisa uye kumisikidza zvakachipa.
Panofanira kuvewo ne kuderedzwa kwekukanganisa kwenzvimbo Kunze kweizvozvo inobvisa ruzha runogadzirwa nemagineti emhepo echinyakare.
Tekinoroji yavo inoshanda nenzira yekuti inoshandisa deformation inokonzerwa nekudengenyeka iyo inokonzerwa nemhepo kana ichipinda mutsindo mune semi-solid solid cylinder uye yakasungirirwa muvhu.
Chikamu chikuru cheVortex, inova ndiyo humburumbira, chavepo Yakagadzirwa nemapayzoelectric zvinhu uye fiberglass kana kabhoni, uye simba remagetsi rinogadzirwa nekuchinja kwezvinhu izvi.
2016 richava gore mune iyo yekutanga isina blad windmill unit yakagadzirira.
Chirongwa chakanyatsogadziriswa inyowani Muti weMhepo urikugadzirwa neNewWind uye ndizvo inoumbwa nemashizha makumi maviri nemapfumbamwe ekugadzira. Imwe yeiwo turbine yakatwasuka ine conical chimiro uye ine diki diki iyo inogona kuburitsa simba nemhepo inofefetera yemamita maviri pasekondi.
Izvi zvinokutendera iwe gadzira simba kwemazuva mazana maviri nemakumi masere mugore uye kugadzirwa kwayo kwese kuri 3.1 kW ine 72 turbines inomhanya. 11 metres kumusoro uye 8 metres dhayamita, Wind Tree iri padyo nehukuru hwemuti chaiwo kuti ugone kukwana zvakakwana munzvimbo iyoyo yemudhorobha.
Un zvakanyanyisa chirongwa uye izvo zvinotiisa pamberi peaya matekinoroji ekutsvaga ayo anotsvaga nzira yekuti inyatsoita uye nekukwanisa kupa simba rakaringana kune yeruzhinji magetsi grid kana sekuwedzera kwechivako.
Zvikamu zvemhepo turbine
Mufananidzo - Wikimedia / Enrique Dans
Mhepo turbines seyakazara vanogona kuyera kusvika pamamita mazana maviri pakukwirira uye makumi maviri ematani zvekurema. Maumbirwo ayo uye zvikamu zvacho zvakaomarara uye zvinogadzirwa kukwidziridza kugadzirwa kwesimba kubva pakumhanya kweXNUMX kusvika pakakwirira.
Pakati pezvinhu uye zvikamu zvemhepo turbineisu tine:
Nheyo dze turbine yemhepo ndeyekuti ive yakasungirirwa pachigadziko chakasimba. Kune izvi, yakatwasuka axis mhepo turbines inovakwa nepasi pevhu yakasimbiswa kongiri hwaro iyo inoenderana neiyo nzvimbo mairi uye inobatsira kutsungirira mhepo mitoro.
Iyo shongwe ndiyo chikamu chemhepo turbine iyo inotsigira huremu hwese uye ndiyo inoita kuti mashizha abve pasi. Iyo yakavakwa nekongiri yakasimbiswa pazasi uye simbi kumusoro. Inowanzova isina mwero kubvumidza mukana weiyo gondola. Iyo shongwe iri pamusoro pekusimudza turbine yemhepo zvakakwana kuitira kuti igone kutora mukana wepamhepo inogona kumhanyisa mhepo. Simbi inotenderera kana fiberglass nacelle yakasungirirwa kumagumo eshongwe.
Mashizha uye rotor
Mazuva ano ma turbine akagadzirwa ne matatu mashizha sezvo ichipa hukuru kumeso mukudzoka. Iwo mashizha akagadzirwa neye polyester inosanganiswa zvinhu pamwe nekusimbiswa kwegirazi kana kabhoni fibers. Aya makomponi anopa iwo mashizha makuru kuramba. Mavara anogona kusvika pamamita zana kureba uye akabatana neiyo rotor hub. Nekuda kweiyi hub, iwo mashizha anogona kuchinja kona yezviitiko zvemashizha kutora mukana wemhepo.
Nezve ma rotor, parizvino yakatenderera uye inogona kunge iine majoini. Kazhinji, izvi zvinowanikwa kudivi remhepo reshongwe. Izvi zvinoitirwa kuitira kudzikamisa iyo mitoro inodzika pamakasi anoonekwa kana iripo kune leeward yacho, nekuti kana banga rikaiswa kuseri kwekumuka kweshongwe, kumhanyisa kwechiitiko kuchashandurwa zvakanyanya.
Iyo cubicle iwe yaunogona kutaura izvozvo Iyo injini kamuri yemhepo turbine. Iyo nacelle inotenderera yakakomberedza shongwe kuti iise turbine yakatarisana nemhepo. Iyo nacelle ine gearbox, main shaft, masystem ekudzora, jenareta, mabhureki, uye nzira dzekutendeuka.
Basa regearbox nderekuti chinja kutendeuka kumhanya kubva kune shaft huru kune iyo inodiwa nejenareta
Mumazuva ano mhepo turbines kune matatu marudzi emagetsi izvo zvinosiyana chete nehunhu hwejenareta kana iri mumamiriro ekunyanyisa kwemhepo kumhanya uye kuedza kunoitwa kudzivirira kuwandisa.
Anenge ese ma turbine anoshandisa imwe yeaya matatu masystem:
Squirrel keji Induction jenareta
Biphasic induction jenareta
Braking system inzira yekuchengetedza Iine ma disc anobatsira mune emergency kana mamiriro ekugadzirisa kumisa chigayo uye kudzivirira kukuvara kune zvivakwa.
Windmill izere pehurumende uye zvoga ne kudzora hurongwa. Iyi sisitimu inoumbwa nemakomputa ayo anochengetedza ruzivo rwunopihwa nemhepo vane uye anemometer yakaiswa pamusoro peiyo nacelle. Nenzira iyi, uchiziva mamiriro ekunze, iwe unogona zvirinani kutungamira chigayo uye mashizha kuti usimudzire kugadzirwa kwesimba nemhepo inovhuvhuta. Ruzivo rwese rwavanogashira nezve mamiriro eiyo turbine anogona kutumirwa kure kure kune yepakati server uye ave nezvose zviri pasi pekutonga. Muchiitiko chekuti mhepo inomhanya kana mamiriro ekunze anogona kukuvadza chimiro chemhepo turbine, neiyo system yekudzora iwe unogona kukurumidza kuziva mamiriro acho uye nekumisikidza braking system, nekudaro uchidzivirira kukuvara.
Kutenda kune ese aya mativi emhepo turbine iwe aunokwanisa gadzira simba remagetsi kubva kumhepo nenzira inomutsidzirwa uye isiri-yakasvibisa nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Simba remhepo » Vertical mhepo turbine
Pablo Acevedo G. akadaro
Tine chirongwa chekugadzira magetsi.Ndinoda macontinema kuti utange.
Pindura pablo acevedo g.
Ndiri kuda kutsvaga turbine yemhepo yeimba inogona kuburitsa 24kwh pazuva rechirongwa chega uye inogona kuratidza mutengo, ndatenda
Hi Javier .. kubva kumubvunzo wako ndinoona kuti unoda 1 kilowatt awa… ndinokupa iwe wakanakisa mutengo uye mhando mumusika
kune izvi ini ndoda yako kumashure senge guta, nyika, nezvimwe.
Jorge Paucar akadaro
Mhoroi NDIRI PAKUTANGA KWENYU PROJECT YAKATEDZESA NEZVINHU ZVAKAVIMBISWA ZVIMWE ZVAKAITWA KUEDZESWA UYE KUSVIRA KUSVIRA IMAI MAIL a_eletropaucar@hotmail.com Peru
Pindura kuna jorge paucar
Francisco Villen. akadaro
Aya behemoths emagetsi ane nzira ipfupi, nekuti iri padyo nekona, kugadzirwa kwemagetsi nemagineti emagetsi (magetsi) uye dzimba dzese dzinozokwanisa kuve nejenareta yavo, ye4 kana 5 kw munzvimbo yakafanana. kune iya yemuchina wekuwachisa.
Pindura kuna Francisco Villen.
Marlon escobar akadaro
Kwaziso, ndinoda rumwe ruzivo kuti ushandise mhinduro yako muchivako chekugara, tinoda kudzikisa uye / kana kubvisa kushandiswa; isu tine hita yemagetsi yedziva uye kuvhenekerwa kwenzvimbo dzese dzinozivikanwa, ndapota tumira zvakakwana ruzivo rwehunyanzvi nezve jenareta akatwasuka.
Pindura Marlon Escobar
Mhuka dzinonyanya kushomeka munyika